အစားစားချင်စိတ်ကိုပိုဆိုးစေတဲ့ အချက်များ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
Craving လို့ ခေါ်တဲ့အစာစားလိုစိတ်ပြင်းပြနေခြင်းဟာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေအတွက်တော့ အကြီးမားဆုံးပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစားစားလိုစိတ်ကို မလွန်ဆန်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပဲ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ကို လက်တွေ့အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေကြတာပါ။ ပိုဆိုးတာက အစားစားလိုစိတ်ပြင်းပြအောင် မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်မိနေတယ်ဆိုတာကို သတိမမူမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းမရအောင်ဖြစ်စေတဲ့ သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်မိနေတဲ့မှားယွင်းနေတဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
1. မနက်စာ မစားခြင်း
မနက်စာမစားတဲ့သူတွေက အစားစားလိုစိတ်ပိုပြင်းပြတတ်ကြပါတယ်။ အာဟာရဆိုင်ရာ စာစောင်မှာပါဝင်တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ပရိုတင်းဓာတ်အနည်းဆုံး 13 ဂရမ်ပါဝင်တဲ့ မနက်စာ 350 ကယ်လိုရီမျှရှိတဲ့ မနက်စာမစားတဲ့ အ၀လွန်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ မနက်စာမစားတဲ့ အ၀လွန်မိန်းကလေးတွေထက် အစာစားလိုစိတ်လျော့နည်းကြောင်းသိရပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အသားဓာတ်ဟာ အာသာပြင်းပြခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့ dopamine ဟော်မုန်းထွက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိန်ခဲပျော့ ခွက်တစ်ဝက်စာနဲ့ ကြက်ဥပြုတ်နှစ်လုံး (သို့မဟုတ်) မြေပဲထောပတ် နှစ်ဇွန်းစာပါဝင်တဲ့ အုတ်ဂျုံတစ်ခွက်ဟာဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေကို အစာစားလိုစိတ်ပြင်းပြခြင်းမရှိအောင် ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
2. ကြိုက်လွန်းအားကြီးတဲ့ အစားအစာကိုထပ်တလဲလဲစားခြင်း
ကြိုက်လွန်းတဲ့အစားအစာကို စားတာကပြဿနာမရှိပေမယ့် မတင်းတိမ်နိုင်ဘဲထပ်ခါတလဲလဲစားမိပါက ကယ်လိုရီအများကြီးရယူမိသလိုဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ပါဝင်သော ကျောင်းသား 104 ယောက်အား chocolate၊ apple pie၊ potato chips စတဲ့ အစားအစာတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏမျှသာစားစေရာမှာ အများကြီးစားလိုက်သလို စိတ်ကျေနပ်မှုရသွားကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းနေသူတွေအနေနဲ့ မိမိစားမယ့်အစားစာကို တစ်နေ့ဘယ်လောက်စားမယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ချက်ထားကာစနစ်တကျစားသုံးသင့်ပါတယ်။
3. ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာနဲ့ တွဲဖက်စားလေ့မရှိခြင်း
မိမိနှစ်ခြိုက်တဲ့အစားအစာကိုချည်းသာ စားနေမယ်ဆိုပါက ထပ်စားပြီးရင်းစားချင်စိတ်ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါကြောင့် မိမိကြိုက်တဲ့အစားအစာနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေမယ့်အစားအစာကို တွဲဖက်စားတတ်တဲ့အကျင့်လုပ်ထားပါက စားချင်တဲ့အစာကို ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာမှာစိုးလို့မစားဘဲမြိုသိပ်မထားရတော့သလို နောက်ထပ်စားဖို့အာသီသပြင်းပြတဲ့စိတ်ကို ထိန်းချုပ်လိုက်သလိုဖြစ်စေတဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေပါတယ်။ အကြော်စာတွေကို ဆော်လမွန်ငါးကင်၊ အရွက်သုပ်နဲ့ တွဲဖက်စားတာမျိုး၊ ကြက်ကင်ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ချိစ်နဲ့တွဲဖက်စားတတ်တဲ့ အကျင့်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ကြိုက်လွန်းတဲ့အစားအစာတစ်ခုကို စားချင်စိတ်ဖြစ်လာခြင်းကို ထိန်းမရခြင်းဟာ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချမယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ စားချင်လွန်းလို့နည်းနည်းစစားလိုက်ရာမှတဆင့် ဆက်စားချင်စိတ်တွေဖြစ်ကာ နည်းနည်းကနေ များများစားဖြစ်သွားပါတယ်။ စားပြီးမှသာပေါင်ချိန်တွေတက်လာတော့မှာပဲဆိုပြီး အပြစ်ရှိသလိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စားချင်စိတ်ပြင်းပြလွန်းရင်တောင် နည်းနည်းလောက်မြည်းစမ်းကြည့်ကာ နောက်ထပ်စားချင်စိတ်ကို လျစ်လျူရှုထားနိုင်အောင် စိတ်ကိုကြိုးစားထိန်းချုပ်သင့်ပါတယ်။
အစာတစ်ခုကို အာသာပြင်းပြနေချိန်မှာ အာရုံလွှဲလိုက်ခြင်းမရှိဘဲ အစားစားချင်တဲ့အပေါ်မှာသာ အာရုံရောက်နေရင်တော့ စားဖြစ်မှာကတော့ 100 ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ ဂိမ်းဆော့ခြင်းဘက်ကို အာရုံပြောင်းလိုက်သူတွေဟာ အာရုံမပြောင်းဘဲနေသူတွေထက် အစာစားချင်စိတ်လျော့ကျသွားကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားအစာတစ်ခုကို စားလိုစိတ်ပြင်းပြလွန်းနေချိန်မှာ စားချင်တယ်ဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာစွဲမထားဘဲ အာရုံပြောင်းလိုက်ပါ။
6. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အစားအစာကိုအလွယ်တကူရနိုင်ခြင်း
ကွတ်ကီးမုန့်တွေနဲ့ မိမိရဲ့စားလိုစိတ်ထက်သန်မှုက လွန်ဆွဲဒွန်တွဲ အားပြိုင်နေတတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်စားလိုတဲ့ မုန့်ဟာသင့်မျက်စိရှေ့မှာ အသင့်ရှိနေတဲ့အခါ မစားမိဖို့စိတ်ကိုတင်းထားပေမယ့်လည်း နောက်ဆုံးမှာတော့ မိမိစိတ်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်တော့တဲ့အတွက် စားမိစေမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် အစားအစာတွေ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေကို လွယ်လင့်တကူယူစားလို့ရနိုင်မယ့်နေရာမျိုးမှာ မထားသင့်ပါဘူး။ အဆင်သင့်ဝယ်မထားတာကတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သွားရည်စာကြိုက်တတ်သူတွေအနေနဲ့ ကွတ်ကီးမုန့်တွေအစား fruit-and-nut bars ကို စားတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေတဲ့အပြင် အစာစားလိုစိတ်ကိုဖြေဖျောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။
7. လူမှုကွန်ယက်များ အသုံးပြုခြင်း
Instagram ဒါမှမဟုတ် Pinterest လို လူမှုကွန်ယက်မျိုးတွေမှာ အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်တစားဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါက စားချင့်စဖွယ်ပြင်ထားတဲ့စားစရာပုံတွေဟာ စားချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင်လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ၀ယ်စားချင်စိတ်၊ ကိုယ်တိုင်ပြင်စားလိုစိတ်တွေပေါ်စေကာ အစားအစာကိုစားဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နာမည်ကြီးတဲ့ ယင်းကဲ့သို့လူမှုကွန်ယက်မျိုးတွေမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာစားရမယ့် အစားအစာတွေနဲ့ ကျန်းမာအောင်ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်သင့်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးတွေကို အဓိကလေ့လာကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
8. စားချင်ထက် စားသင့်တာကို ရွေးချယ်ဖို့စိတ်မကူးမိခြင်း
သကြားလုံးစားဖို့အာသာပြင်းပြနေချိန်မှာ သကြားလုံးအစား စတော်ဘယ်ရီသီးစားမယ်လို့ စိတ်မပြောင်းလိုက်ပါက သင်စားလိုတဲ့ အစားအစာအပေါ်စားချင်စိတ်က မလျော့သွားနိုင်ပါဘူး။ အာသီသပြင်းပြခြင်းဆိုတာ အချိန်ခဏသာကြာတဲ့ စွဲလမ်းမှုတစ်ခုပါ။ အချိန်အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုကို လွန်မြောက်သွားနိုင်ပြီဆိုပါက သင်စားချင်တဲ့ အစားအစာအပေါ်စွဲလမ်းစိတ်က ပြေပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စားချင်စိတ်ပြင်းပြလွန်းနေတဲ့စိတ်ကို ဖြေသိမ့်ပေးဖို့အတွက် မိမိမစားဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အစားအစာနေရာမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးကို အစားထိုးစားလိုက်သင့်ပါတယ်။
ပျင်းရိတာကြောင့် တီဗွီကြည့်ရင်းမုန့်ကိုတစ်တွတ်တွတ်စားနေခြင်းကလည်း အတိုင်းအဆမရှိ စားမိစေတဲ့အပြင် မုန့်ကုန်လို့ကုန်သွားမှန်းတောင်မသိလိုက်ဘဲ နောက်ထပ်ဆက်စားလိုစိတ်က ကျန်နေတတ်ပြီး အသင့်ရှိသမျှမုန့်တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်စားမိစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပျင်းရိစိတ်ကိုဖြေဖြောက်ဖို့အတွက် တီဗွီကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်ပျူတာဆီအာရုံလွှဲလိုက်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်သင့်ပြီး သင့်အနေနဲ့တစ်စုံတစ်ခုကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာအာရုံစိုက်နေချိန်မှာ သင့်အနီးအနားတစ်ဝိုက်မှာ အစားအသောက်တွေယူမထားသင့်ပါဘူး။
မျက်နှာသစ်တိုင်း ဒီအချက်လေးတွေ လိုက်နာပြီး စိုပြေကျန်းမာတဲ့ မျက်နှာအသားအရေလေးကို ဖန်တီးကြရအောင်
၁၃.၁.၂၀၁၉ | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
မျက်နှာလေးကို ချောမွေ့ဝင်းပပြီး လှပလာစေဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညီညွတ်ညွတ် မျက်နှာသစ်ကြမယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် မျက်နှာသစ်နည်း အသွယ်သွယ်ကို လိုက်နာပြီး စိုပြေကျန်းမာတဲ့ မျက်နှာအသားအရေလေးကို ဖန်တီးကြရအောင်။
● တစ်ရက် နှစ်ကြိမ်သစ်ရင် လုံလောက်ပါပြီ။ မနက်အိပ်...
လုံးဝမစားမသောက် အငတ်ခံပြီး ဝိတ်ချစရာမလိုတော့ဘူးနော် ... ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ
၂၉.၁၂.၂၀၁၈ | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
၁။ မနက်စာကို များများစားပါ။
အသီးချည်းပဲ စားစရာမလိုတော့ဘူးနော်။ ပရိုတင်းနဲ့ အဆီနည်းနည်းလည်း လိုတာပေါ့။ ကြက်ဥမွှေကြော်နဲ့ ဝက်အူချောင်းကြော်တွေက ဗိုက်ကို ပိုပြည့်စေနိုင်တယ်။
မနက်စာ၊ နေ့လယ်စာ၊ ညစာေ...